BadeBOTTI.CH – ဆွစ်ဇာလန်မူရင်းကတည်းက 2004 | ab CHF 1699.- ဘတ်ဂျက်ထဲကနေသီးသန့်ဖို့ – BadeBOTTI.CH ဆွစ်မူရင်းပူ tubs ချွေးပေါင်းအိမ်ဥယျာဉ်ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ် – ရေပူကန်အဆောက်အဦးအပြင်ချွေးပေါင်းအိမ် Jacuzzi – အိမ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာ နေ. နှင့်အပန်းဖြေ – Badefass – Gartensauna – ရှုခင်းကြည့်အဆောက်အအုံငယ် handcrafted
အဆိုပါရေပူကန်; ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတစ်အံ့သြဖွယ်ခံစားမှု … တစ်နှစ်ပတ်လုံး …
စည်ပိုင်း SAUNA;အိမ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂလိကလေထုထဲတွင်အပန်းဖြေကျန်းမာအပန်းဖြေ …
သင်အထူးသဖြင့်အပူကိုပထမဆုံးအတန်းအစားမွေ့လျော်နိုင်ခြွင်းချက်ပုံသဏ္ဍာန် – အဆိုပါကျစ်လစ်သိပ်သည်းအတိုင်းအတာအားလုံးနီးပါးနေရာတွေကိုဖို့ sauna ရရှိနိုင်စေ. အသက်တာရှည်များအတွက်အိမ်ခေါင်မိုးကရိယာနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောင့်အများကြီးအပြင်ဘက်တွင်.
အဆိုပါ BBQ Hut တွင် / အသားကင်ညျအိမျ; သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကိုမှပြီးပြည့်စုံသည့်အပြင် …
မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထိုင်လျက်, ချက်ပြုတ်သူ, grillieren, ထို Morning Break များရယ်မောတက် chatting. အဆိုပါကင်အိမ်စံပြနွေရာသီပြခန်းဖြစ်ပါသည် – အဆိုပါဘာဘီကျူးများတဲလုံးကိုရာသီများအတွက်အပြည့်အဝ insulator တွင်လည်းရတနာ.
ကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့ရန် – ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CHF တောင်း / အီးယူအာရ် / အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးနှုန်းများစာရင်း.
(42,572 ဒီ post ကိုကြည့်ရှုပြီးမှအဘယ်သူသည်ဧည့်သည်များ)
Eleonore Griesser လို့ပြောတယ်:
26. မေ 2014 မှာ 15:22
26. မေ 2014 မှာ 15:50
သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျနော်တို့ဘဲဥပုံကျဆင်းရေကူးကန်များ (LxWxH 100x80x100cm) 160cm အချင်းကနေဒါမှမဟုတ်ပတ်ပတ်လည်ဟော့ Tubs စံလိုင်း. ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူလည်းတစ်ဦးချင်းစီပူစည်ပိုင်းယ်ယူနိုင်ပါသည်. သငျသညျနောက်ပိုင်းသစ်သားမီးဖိုသို့မဟုတ်လျှပ်စစ်အပူပေးထားဖို့လိုပါလျှင်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူnachträglichhတစ်ဦးချင်းစီမှာလည်းဒီမဝယ်နိုင်. သြစတြီးယားမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကနေတိုက်ရိုက်မကယ်မလွှတ်.
မိုးလုံလေလုံတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရေငုပ်စည်အကြံပြု / ကနေဒါအနီရောင် 120cm တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့်ရှိပြီးသားရရှိနိုင်သောအာရဇ်ပင် မှစ. 92cm အမြင့်၏ Ofuro. ဤသည်သစ်သားမိုးလုံလေလုံအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်, မဟုတ်အသုံးပြုမှုအတွက်တင်းကျပ်စွာဖြစ်နေဆဲအခါသာသေးငယ်တဲ့ကျုံ့အပြုအမူနှင့်အရှင်ရေချိုးသို့မဟုတ်ချွေးပေါင်းအိမ်အအေးရေကူးကန်ရှိပါတယ်ကတည်းက.
အကြှနျုပျတို့သညျမှက e-mail ဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ယူရိုစျေးနှုန်းစာရင်းစေလွှတ်ပြီ.
Steiner Janine လို့ပြောတယ်:
18. မေ 2014 မှာ 15:26
18. မေ 2014 မှာ 15:31
သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ကျနော်တို့ပြင်ပမီးဖိုနှင့်အတူရေချိုးစည်၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးရှိသည် – စျေးပေါကနေသီးသန့်ဖို့.
သင့်ရဲ့ e-mail, စစ်ဆေးပါ, တောင်းဆိုထားသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင်စေလွှတ်ခဲ့သည်.